I-Quiet Western Lakes kunye nolwandle, isaphulelo se-25% ngeveki
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguHugh
I-Old House House ikwicala elihle, elinoxolo lasentshona yeSithili seLake. Yindlu entle eneminyaka engama-250 ubudala enezinto ezininzi zexesha, iimayile nje ezimbini ukusuka kwisanti, ezolileyo, enobubele bezinja, elunxwemeni olukhuselekileyo. Imalunga neekhilomitha ezi-4 ukusuka kuloliwe waseRavenglass ukuya e-Eskdale. Le yindawo yabo bafuna ukuphuma kwiindawo ezisemaphandleni ezintle kunye nokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile ukusuka emnyango. Silandela ucoceko olungqongqo kunye neprothokholi yokucoca. IFog Fan™ isetyenziswe phambi kokufika kweendwendwe
Le ndlu yindawo ekuyiwa kuyo ngokwayo, nomgangatho ophezulu une-snug kunye ne-TV kunye ne-DVD player, iimbotyi kunye ne-futon. Elinye igumbi elikumgangatho ophezulu linetafile yebhola ekhatywayo, enefuton kunye nebhedi eyodwa. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi okulala amabini amakhulu aneebhedi ezinokuthi zenziwe njengebhedi enkulu yenkosi okanye 3 ft ububanzi. Kukwakho negumbi lokulala elinebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Le ndlu likhaya lokwenyani ukusuka ekhaya, ineesofa zesikhumba ezijikeleze isitshisi samafutha amaninzi kwigumbi lokuphumla, inomabonakude eneSAT yasimahla kunye neDVD, kwaye kukho iiDVD ezininzi, imidlalo kunye neencwadi zokukugcina uxakekile. Wamkelekile ukuba uthathe incwadi ukuba unokushiya enye endaweni yayo. Kukho igumbi lokutyela elihle kunye nekhitshi elikhulu lokutyela elineengcango zepatio ezikhokelela kwipatio egqunyiweyo kunye negadi entle esemazantsi-ntshona efikelela kwipaki yemoto yelali enendawo yokupaka eninzi ekhoyo. Kukho ivenkile enkulu ekhuselekileyo egadini elungele iibhayisekile kunye naso nasiphi na esinye isixhobo sangaphandle okhetha ukusizisa njengephenyane okanye i-kayaks. Ubume bendlu buyenza ikhululeke kumaqela amancinci okanye amakhulu ukuya kuthi ga kwi-8.
Kukho ubutyebi bemisebenzi ngaphakathi kwendawo. Inqaba yaseMuncaster ikumgama oziikhilomitha ezi-3, iConiston Water, ikhaya kwiirekhodi ezininzi ezidumileyo zesantya nguDonald Campbell enemyuziyam ezinikele koku kunye negcisa elidumileyo uJohn Ruskin. Kukho iWast Water, iziko lamahashe eCumbrian Heavy lokukhwela ihashe elunxwemeni, iBootle, iRavenglass kunye neelwandle zaseSilecroft, inqaba yaseHardKnott yaseRoma kunye nokudlula okumangalisayo. Kukho intlaninge yokukhwela ibhayisekile yeentaba kunye namathuba okunyuka intaba, kwaye indlu ineemephu ezibonisa ezi kunye ne-Scafell Pike kunye neNdoda endala yaseConiston ekufutshane, kunye neebhayisekile zokuqesha zikaMuncaster Cycle. Kukho amaziko amaninzi akufutshane okwenziwa ngaphandle aquka iWest Lakes Adventure Centre kunye neJoint adventures.
Kukho ukutya okuninzi, kunye ne-Brye 300 yeemitha kude, i-Brown Cow, i-2 yeemayile, i-Ratty Arms, i-Inn kunye ne-Pennington Hotel e-Ravenglass iimayile ezi-4, kunye ne-Miner's Arms, i-Silecroft, iikhilomitha ezi-3 kude kunye nokunye okuninzi!
4.52 · Izimvo eziyi-60
Indlu sisiseko esihle sokuhlola iiLakes, kunye nololiwe iRavenglass ukuya e-Eskdale, eyona ndawo iphakamileyo eNgilani, iikhilomitha ezi-4 kude.
Kukho ulwandle oluhle, oluzolileyo, olulungele inja kumgama oziikhilomitha nje ezimbini, udlula kwisikhululo saseBootle. Inesanti eninzi xa amanzi ephumile, kwaye ngelixa ingenaye umhlanguli osemsebenzini, ikhuseleke kakhulu, kunye nethambeka elithambileyo. Kukho ezinye iilwandle eHyton naseSilecroft.
Inqaba yaseMuncaster ikumgama oziikhilomitha ezi-3.
Sikwilali ezolileyo yaseLakeland eBootle, enevenkile kunye nekhefi. I-Byre Cafe ikwavulwa njengebhari ngolweSihlanu ngokuhlwa rhoqo ngenyanga-jonga iphepha labo likaFacebook ukuze ufumanise ukuba ivulwa nini.
Sihlala iimayile ezininzi kude kodwa sinonxibelelwano lwasekhaya xa kukho imeko kaxakeka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bootle